8 marsa – Hafatra tsy misorona avy amin’i Damy Govina – Blaogin'i Voniary
Lainga izany hoe efa nihaona tamin’i Damy Govina ianao ka hohadinoinao izy, na tsy niresaka mivantana taminy aza ianao. Vehivavy misongadina lalandava izy amin’izy rehetra alehany, tsy misalasala ny mametraka ny maha izy azy. Asa noho izy tsy misorona angaha : maneho ny heviny tsy miolakolaka, milaza ny marina tsy mialokaloka ao anaty voambolana voasarontsarona? Mampihomehy, mandratra, manindrona indraindray fa mahatonga saina sy mampieritreritra matetika. Mety maro mpankahala sy mpanenjika izy amin’izany saingy tsy manome vahana azy ireny eo amin’ny fiainany i Govina. Inoako koa anefa fa maro ny toa ahy mankalaza, manohana ary maka lesona mihitsy aza.
Loabariandasy iray nandraisan’i Damy Govina anjara. cc : Damy Govina
Vehivavy maro sahanina raha i Damy Govina: mpanao gazety, filoham-pikambanana, mpampiofana amin’ny fampivelarana ny isam-batan’olona, mpanakanto… Renim-pianakaviana koa anefa izy : manambady sy manan-janaka roa lahy kely. Miezaka mampifanindran-dalana ireo rehetra ireo izy na dia goavana aza ny fanamby atrehiny amin’izany. Ny fiainany sy ny traikefany dia ohatra maneho fa ady ny fiainana ary natao ho mpandresy izaho, ianao, isika. Tsy ny tantaram-piainany anefa no entina amintsika anio, aleo zokin’ny ao aoriana iny. Fa ao anatin’ny izao fanamarihana ny 8 marsa, andron’ny vehivavy izao, asaiko ianao hankafy ilay fiteniny tsy miolakolaka hizarany hevitra mikasika ny zava-misy iainan’ny vehivavy malagasy izy.
Voniary: Afaka mivelatra sy maneho ny maha izy azy ve ny vehivavy manambady eto amintsika?
Damy Govina: Miankina amin’ny safidin’ny tsirairay io! Misy ny zazavavy notaizaina hanana toe-tsaina hiankin-doha amin’ny vadiny. Tsy ho tonga ao an-tsainy mihitsy ny hiasa na hanao lahasa ivelan’ny tokantranony. Ny fahasambarana sy ny mety aminy dia izay sitrak’ilay lehilahy nampakatra azy. Ary adidy ho azy ny fanompoana ilay lehilahy satria io no mamelona, mampiantrano sy mampitafy azy. Mirehareha izy satria vadin’i… Misy kosa anefa zazavavy miketrika mba ho tafita ary tsy laharam-pahamehana aminy ny hiaraka amin’olona na hanambady.
Hetsika ara-kolotsaina iray natrehin’i Damy Govina. cc : Damy Govina
Amiko, tsy misy mahasakana ny vehivavy tsy handray anjara amin’ny fampidiram-bola ao an-tokantrano mihitsy. Ny zava-dehibe dia ny fifampiresahan’ny roa tonta ary ny fifampitsinjarana andraikitra (iza no tokony hanao inona?) mba tsy ho lasa vesatra ho an’ny ankilany fotsiny ny tokantrano. Mila sila-panahy mahatsapa ny fahaizany sy ny heriny ny vehivavy fa tsy mandray azy ho fakana fahafinaretana sy taranaka fotsiny ihany!
Voniary: Tsy maintsy mihaingo sy manao manjamanja ve ny vehivavy mba hanomezan’ny olona hasina azy?
Damy Govina: Io resaka hatsaran-tarehy io dia zary fenitra napetraky ny fiarahamonina, indrindra ny lehilahy, handrefesana ny maha izy azy ny vehivavy. Mahagaga fa manaiky izany isika vehivavy na dia hita fa manambany antsika aza izany. Ary raha mbola ny lehilahy no heverina fa lohan’ny zava-drehetra, sy tompon’ny fahaizana dia tsy maintsy hijanona ho fanaka sy haingon-trano ihany ny vehivavy na manam-pahaizana izy na tsia.
Damy Govina, mpianatra nivoaka tao amin’ny YLTP tamin’ny taona 2019
Nahoana moa raha vao miresaka fikojakojana tarehy isika dia vehivavy avy hatrany no tonga ao an-tsaina? Misy akora sy kojakoja natokana ho an’ny lehilahy koa ange e! Ny vehivavy tsy manao lokomena, manjamaso, sns dia raisin’ny fiarahamonina ho olona tsy mandroso, tsy maharaka, tsy mahava-tena. Amiko anefa, resaka tsy misy fotony izany! Tsy misy manery ny tsirairay handokoloko ny tarehiny mihitsy izay vao hanana ny toerana tokony hisy azy izy. Ny hasin’ny olona iray angaha miankina amin’ny endrika ivelany asehony sa ny asa ataony? Raha miankina amin’izay heverin’ny olona sy hotenenin’ny olona foana ianao eo amin’ny fiainanao dia tsarovy fa tsy tompon’ny fiainanao ianao izay. Fehiny : na manao « manjamanja » ianao na tsia, tsy mampiova ny hasinao sy ny soatoavina ijoroanao izany.
Voniary: Tsy maintsy mametraka kely, na “mikarakara” hono ny vehivavy vao mahavita zavatra eto amintsika?
« Akory e! » hetsika fampahafantarana ny tenim-paritra nokarakarain’ny Gasiko, fikambanana tarihin’i Damy Govina. cc : Govina
Damy Govina: Izany tokoa ve? Raha araka izany filazanao azy izany dia tsy afa-mihetsika na afaka hitondra ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana mihitsy izany ny vehivavy malagasy? Raha ny hevitro manokana, matoa isika manome vahana ny hadalan’ny sasany sy manisy resa-be manodidina izany dia ankatoavintsika sy ekentsika ireny fihetsika ireny. Ny antony dia tia hajaina, tia omem-boninahitra, tia avahana loatra Ramalagasy. Betsaka ny kamo be tenda mialokaloka ao ambadiky ny anaran-dray aman-dreniny na miankina amin’ny foko niaviany. Hany ka zary lasa kolontsaina ny manolotra kely, manao kolikoly mba hahatontosan-javatra.
Amiko anefa, ny fikirizana, ny faharetana, ny fahavononana ary indrindra ny fahatokisan-tena no andry efatra ahafahana mahavita zavatra goavana. Raha zatra manao tsolotra amin’ny endriny isan-karazany ianao, tsy misy fahombiazana ho azonao amin’izany. Tsy hanana ilay fifaliana, fahafaham-po sy rehareha anaty amin’ny fiotazam-bokatra avy amin’ny hatsembohanao sy ny fikirizanao mihitsy ianao. Rehefa manomboka tonga saina ianao fa tsy misy zavatra azo mora izany eo amin’ny fiainana, dia hahavita zavatra goavana ianao izay.
Mankasitraka an’I Govina amin’izay hafatra mafonja ho an’ny Malagasy rehetra, indrindra ny vehivavy amin’izao 08 marsa izao. Atsipy ny tady eny an-tandoky ny omby, atsipy ny teny eny am-pon’ny mahalala.
8 marsa, akory e!, damy govina, gasiko, vehivavy malagasy